Solovava · Marsa, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Solovava · Marsa, 2019
Tantara mikasika ny Solovava tamin'ny Marsa, 2019
Israely – Dingana iray hafa amin'ny fameran'ny governemanta ny habaka
Israely29 Marsa 2019
Nodinihina tao amin'ny Knesset tamin'ny 24 Oktobra 2007 ny soso-kevitra ary nolavina nandritra ny fivorian'ny Komity Ara-toekarena tamin'ny 26 febroary 2008. Nisy mpikambana enina hafa nanatevin-daharana ny ezaka nataon'ny MK Miller mba handaniana an'ity volavolan-dalàna ity tao amin'ny Knesset.
India26 Marsa 2019
Egypta: nanjavona ny bilaogera iray raha mbola voatazona any am-ponja ny iray hafa na dia teo aza ny didin'ny fitsarana
Ejipta22 Marsa 2019
Nanjavona nanomboka ny Zoma 21 Novambra 2008 ilay bilaogera Mohammad Adel izay mitantana ny bilaogy Maeit ( efa maty! ) . Araka ny notaterin'i Wael Abbas tao amin'ny Twitter , voalaza fa hihaona amin'ny mpanao gazety Amerikanina iray mba hanatontosa antsafa i Adel saingy tsy nipoitra izy.
Kamerà eny rehetra eny: Fanamby sy fahafahana ankehitriny eo amin'ny kihon-dalan'ny zon'olombelona, lahatsary sy ny teknolojia
Hafanam-po21 Marsa 2019
Mampahatsiahy antsika ny revolisionan'ny "Lohataona Arabo" sy ny tolona mitohy ho an'ny fiovàna any Libia, Syria ary ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao fa manana anjara andraikitra lehibe amin'ny hetsika fiovàna ara-tsosialy sy ara-politika amin'izao androntsika izao ny finday, ny lahatsary ary ny aterineto.
Holandy: Firenena voalohany ao Eoropa ahitana tsy fitongilanana antserasera
Holandy20 Marsa 2019
Andro iray hankalazaina any Holandy ny 8 May 2012 noho izy lasa firenena voalohany ao Eoropa miaro ny olom-pireneny amin'ny alalan'ny fametrahana ny tsy fiandaniana amin'ny aterineto ao anaty lalàna.
Fitondram-panjaka tokana ao Bahrain: Fahavalon'ny aterineto
Bahrain20 Marsa 2019
Tamin'ny herinandro ny manampahefana Bahrainita nisambotra ny Filohan'ny Foiben'ny Zon'Olombelona ao Bahrain, Nabeel Rajab rehefa niverina avy any Libanona tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Bahrain izy.
Delfi v. Estônia: Fampandraisana Andraikitra Ny Vohikala Web Amin'ireo Fanehoankevitry ny Mpampiasa Aterineto, Mety Hanakenda ny Fahalalahana Maneho Hevitra
Eoropa Andrefana18 Marsa 2019
Malalaka ny fanehoankevitra - mandrapiovany ho tsy toy izay intsony. Hanapa-kevitra tsy ho ela ny Fitsaràna Eoropeana mikasika ny Zon'olombelona raha toa ireo vohikala Web tokony ho tomponandraikitra amin'ny vontoatin'ny fanehoankevitr'ireo mpampiasa aterineto na tsia.
Tsy misy hetsika manohitra ny fanamelohana ilay mpisera Afgana ho faty
Afganistana18 Marsa 2019
Mpianatra ho mpanao gazety tao amin'ny Oniversiten'i Balk ao Mazar-i Sharif i Sayed Parwez Kambakhsh. Nolazaina fa nandika tahaka lahatsoratra iray avy ao amin'ny tranonkala Iraniana nitsikera ny toeran'ny finoana Islamo momba ny fihetsika manoloana ny vehivavy izy, ary nilaza ny eritreriny manokana momba izany - tahaka ny fanaon'ny bilaogera.
Nabeel Rajab: Misioka avy any am-ponja!
Bahrain15 Marsa 2019
Nosamborina indray i Nabeel Rajab, filohan'ny Foibe momba ny Zon'olombelona ao Bahrain, izay navotsotra vonjimaika tamin'ny herinandro lasa. Tahaka ny farany teo, nogadraina noho ny famoahana izay heverin'ny governemanta Bahrainita fa lahatsoratra manevateva tao amin'ny kaontiiny Twitter i Nabeel Rajab. Vokatr'izany, dia hogadraina mandritra ny 7 andro izy.
Polisy antserasera, Jeografia ao Iran
Iràna14 Marsa 2019
Nitatitra ny radiom-pirenena fa mikasa hanaparitaka "polisy antserasera" manerana ny firenena i Iran, nilaza ny Jeneraly Ahmadi Moghaddam fa "tsy misy fotoana hiandrasana" amin'ny fametrahana ny fiarovana farany an'ny Repoblika Islamika amin'ireo fahavalony tena izy sy fantany.